Ọ bụrụ na ị chọrọ na-anakọta data na dijitalụ afọ, i kwesịrị ịghọta na unu na-adọpụ ndị ya na-. A oge na uche bụ incredibly bara uru gị; ọ bụ akụrụngwa gị nnyocha. Ọtụtụ na-elekọta mmadụ ọkà mmụta sayensị na-agba nkịtị na-emebe nchọpụta ọ dịtụ n'agha bi, dị ka undergraduates na campus labs. Na ntọala ndị a, mkpa nke ndị na-eme nchọpụta na-achịkwa, na ịnụ ụtọ sonyere bụghị a nnukwu mkpa. Na dijitalụ afọ nnyocha a na-abụghị adigide. Sonyere na-abụkarị ndị ahụ dị anya site na-eme nnyocha na na mmekọrịta dị n'etiti mmadụ abụọ a na-onye ogbugbo ya a na kọmputa. Nke a na ọnọdụ pụtara na-eme nnyocha na-adọpụ sonyere 'anya na Ya mere ga-ike a na-atọkwu ụtọ iso na ahụmahụ. Ọ bụ ya mere dị n'isiokwu ahụ aka inwe mmekọrịta na sonyere, anyị hụrụ ihe atụ nke ọmụmụ na ama ada a soò na-eche nanị obibia data collection.
Dị ka ihe atụ, n'Isi nke 3, anyị hụrụ otú Sharad Goel, Winter Mason, na Duncan Watts (2010) kere a egwuregwu a na-akpọ Friendsense na bụ n'ezie a nkọ etiti gburugburu àgwà nnyocha e mere. N'Isi nke 4, anyị hụrụ otú i nwere ike ịmepụta efu variable eri data site emebe nwere na ndị mmadụ n'ezie chọrọ ịbụ na, dị ka music nbudata nnwale na m kere na Peter Dodds na Duncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . N'ikpeazụ, ke Ibuot 5, anyị hụrụ otú Galaxy Zoo kere a uka mmekota na-akpali ihe karịrị 100,000 mmadụ isonye na ihe dị na mbara igwe (na ma nwee uche ziri ezi nke okwu) image labeling ọrụ (Lintott et al. 2011) . Na nke ọ bụla n'ime okwu ikpe ndị, na-eme nnyocha lekwasịrị anya na-eke a mma ahụmahụ sonyere, na n'ọnọdụ ọ bụla, a soò na-eche nanị obibia nyeere ọhụrụ iche iche nke nnyocha.
M na-atụ anya na-eme n'ọdịnihu, na-eme nnyocha ga-anọgide na-azụlite-abịaru nso ka data collection na-agbalịsi ike a mma o ahụmahụ. Cheta, na dijitalụ afọ, gị sonyere na otu click n'ebe a video nke a skateboarding nkịta.